आजको तस्वीर : चढ्दो गर्मी, बढ्दो फोहर, यस्तैछ बागलुङ नगर… ! – ebaglung.com
२०७५ जेष्ठ १, मंगलवार १२:४०	Top News, अन्य समाचार
बागलुङ २०७५ जेठ १ । आज देखी जेठ महिना लागेको छ । गर्मीको पारोपनि चढ्दै छ । एक जना फेसबुम मित्र शम्भु आचार्यले आजै विहान बागलुङ नगरपालिकाको फोहोर दृश्यको एक तस्वीरलाई फेसबुक वालमा राखेर नगरपालिका दुर्गन्धित बन्दै गएकोमा चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।
बागलुङ नगरपालिका-१ खनियाबास देखि निरहे जाने बाटोमा देखिएको कुखुराको भुत्ला, आन्द्राभुडी लगायत अन्य फोहोरको गन्धले झण्डै बेहोस भइएन भन्दै उनले लेखेका छन् ‘नगरपालिका, उपभोक्ता मञ्च, १ न. वार्ड कार्यालय रामरेखा, जि.प्र.का. बागलुङमा अनुरोध गर्दा हाल सम्म कुनै निकायबाट समाधान भएन ।’
गर्मी चढ्दो, फोहोर बढ्दो भएपछी कुनै रोगव्याधलाई गम्भीर निमन्त्रणाको संकेत भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ । रित्तो बिमान हावामा उडाएर त्यस्को भुक्तानी नगरपालिकाको बजेटबाट बिमान कम्पनिलाई दिने आँट गर्नेहरुका लागि फोहोर मैला जस्तो तपसीलका विषयमा सोँच्ने फुर्सद कहाँ ?